बिराटनगरमा बुधबार दुर्घटनामा परेकी यी महिला को हुन्? अझै पहिचान खुलेन – Taja Khawar
बिराटनगरमा बुधबार दुर्घटनामा परेकी यी महिला को हुन्? अझै पहिचान खुलेन
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र ०५, २०७७ समय: ३:५०:२८
विराटनगरको महेन्द्रचौक स्थित मदर एण्ड चाईल्ड अस्पताल अगाडी भएको सवारी दुर्घटनामा घाइते महिलाको पहिचान खुलेको छैन । उनी बुधबार सवारी दुर्घटना मा परि गम्भिर घाईते भएकी थिइन् ।
विराटनगरको बरगाछीबाट बसपार्कतर्फ आउदै गरेको मे ६ प ३१५२ नम्बरको रातो मोटरसाईकलले ती महिलालाई ठक्कर दिएको थियो । ती महिला अन्दाजी ५५ – ६० बर्ष उमेरकी देखिन्छिन् ।
घाईते महिलालाई मदर एण्ड चाईल्ड अस्पतालको एम्बुलेन्सले तत्काल उद्धारगरी अहिले न्यूरो अस्पताललमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पहाडीमुलको जस्तो देखिने घाइते महिलाले पहेंलो र रातो कोठे सारी लगाएकी छिन् ।
गम्भिर घाईते भएका कारण उनको अहिले सम्म पहिचान नखुलेकोले उपचारमा समस्या भईरहेको छ । बाँकी परिचय खुल्ने अन्य आधार समेत साथमा फेला नपरेका कारण प्रहरी आफन्तको खोजीमा लागेको छ ।
Last Updated on: March 18th, 2021 at 3:50 am